ISIKWELETU SOMthombo 12/1.
ZONKE IZITHOMBE ZEMPELA. ENDLINI EYODWA NGIQESHA AMA-APARTMENT EZILISHUMI, BHEKA IPROFILE YAMI. NGINGABEKA IQEMBU LABANTU ABAFIKA KU-50 NGESIKHATHI ESISISO. UBUDLA KUSUKA ESIKWENI SEMITHOMBO-100 MTERS, KUSUKA Edolobheni ELIDALA-500 MTERS.
BONA IPHROFA YAMI KU-LINK ::
Ifulethi selilungisiwe, ilineni, umshini wokuwasha, ama-slippers alahlwayo, umuthi wokuxubha.
Lapho ubeka izakhamizi zesifazane zase-Azerbaijan ngobulili besilisa, kuyadingeka ukunikeza isitifiketi somshado.
Ifulethi elinokubukwa kolwandle, elisenkabeni ye-Baku. Emaminithini angu-2 ukuhamba uzofika esigcawini somthombo, imizuzu emithathu ukuhamba ibanga ukuya emgodini. Ikakhulukazi, zonke ezikhangayo zingaphakathi kwebanga lokuhamba.. B, vbb c
Indlu ebheke ulwandle iseduze kakhulu nezindawo eziyinhloko zokuvakashelwa kwezivakashi zedolobha lethu, okungukuthi, lezi yizindawo ezibukwayo zendawo lapho ungadla khona okumnandi kakhulu futhi okungabizi, kanye nezindawo zokuzijabulisa kanye ne-embankment.
Ngithintana amahora angu-24 ngosuku futhi ngihlala ngijabule ukusiza izivakashi ze-Baku yethu eshisayo enelanga!